Nhau - Zvakanakira kushandisa tin bhokisi kurongedza
Mumakore achangopfuura, tini bhokisi kurongedza rakagadzira nekukurumidza mumusika wepaketi, uye mugove waro uri kuwedzera. Yakave ichishandiswa zvakanyanya mupaketi yekudya, yekushongedza zvipfeko, kurongedza kwemishonga, kurongedza kwemakemikari uye mimwe minda. Pakati pavo, mabhokisi echikafu echikafu anoverengera chikamu chakakura, chinotungamirwa neti tii mabhokisi uye mwedzi keke tini mabhokisi Icho chikonzero chekukurumidza kukura kwetini bhokisi kurongedza hachiparadzanisike kubva kune ayo akasarudzika maitiro. Nhasi, indasitiri tini bhokisi fekitori iri kutora kutarisa kune zvine simba zvakanakira tini bhokisi kurongedza nemunhu wese.
Chekutanga pane zvese, zvekuona kutaura, iyo tini bhokisi kurongedza pachayo ine yayo yesimbi kubwinya, uye yekudhinda mhedzisiro iri pachena zvakanyanya kupfuura zvimwe zvekurongedza zvinhu. Mushure mekudhindwa kwetini bhokisi, iwo mavara anopenya uye akanaka, uye mapatani akafanana nehupenyu, ayo asingori chete ekuwedzera aesthetics yezvinhu, asi zvakare zvinoratidza kuti izvo zvinhu zviri zvepamusoro-giredhi uye zvine kumeso. Naizvozvo, vatengi vazhinji vanonyanya kusarudza zvipo zviri mubhokisi remarata pavanosarudza zvipo.
Kechipiri, iro tini bhokisi kurongedza rakagadzirwa ne tinplate zvinhu, izvo zvine zvirinani mhepo kuomesa, shading, kutsva uye kumanikidza kuramba kupfuura chero chimwe chinhu chepaketi zvinhu, uye zvinogona kuchengetedza chigadzirwa kusvika pakukwirira zvakanyanya. Uye nekuda kweiyo ductility uye kupurasitiki kwetinplate, tini bhokisi kurongedza rinogona kuumbwa mune akasiyana maumbirwo, senge akakomberedza tini mabhokisi, mativi tini mabhokisi, emoyo-akafanana tini mabhokisi, trapezoidal tini mabhokisi, uye akatonyanya mamwe akasiyana mabhokisi etini. Zviri nyore kuitwa kuburikidza neforoma.
Uye zvakare, iyo tini bhokisi kurongedza inodzivirira nharaunda. Zvinoenderana neongororo yemusika wechipo mushure mehoridhe mumakore achangopfuura, mushure meMutambo weChirimo uye Mid-Autumn Mutambo, mwero wekudzokorodza kweakawanda asiri ezvemukati kurongedza wakadzika kwazvo, nepo muyero wekudzokorodza wemabhokisi esimbi akadai semwedzi keke gaba mabhokisi uye zvihwitsi tin mabhokisi ari kuwedzera gore negore. Iyo bhokisi resimbi inogona kudzokororwa uye inozivikanwa seyakagadzikana nharaunda girazi kurongedza. Izvo zvigadzirwa zvakaiswa mumabhokisi esimbi, ayo asingori chete anovandudza mhando yezvigadzirwa, asi zvakare anoponesa zviwanikwa uye anoderedza kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Naizvozvo, mune ramangwana rekutakura musika netemusoro wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kushandiswa kwetinplate kurongedza kunosungirwa kuve iko kweyekugadzira indasitiri.
Post nguva: Mar-16-2018
Cd Kuchengetera Kesi, Bhokisi ReTini, Simbi Yekuchengetedza Basket Iine Lid, Tin Bhokisi Rekutakura, Mhete Inodhonza Inogona Kuvhura Claw, Yakasarudzika Tin Bhokisi,